Missouri Cannabis Gweta - Dan Viets Anotaura Cannabis muMissouri
Missouri Cannabis Mutemo naGweta Dan Viets
Missouri ichaenda pamutemo Adult-Shandisa Cannabis muna 2020?
Missouri cannabis gweta, Dan Viets, akaita mutemo muMissouri kweanopfuura makore makumi matatu. Akapedza yakawanda yenguva yake achidzivirira vanhu veMissourians kubva kumitemo yekare cannabis. Pamusoro pekuve nhengo yebhodhi yeNORML iye zvakare anogashira Conan O'Brien paTonight Show's "Audiencey Mubairo" we "Kutarisa Zvakanyanya SaCollege Purofesa Angagone Kukutsira Hora". Iye kwenguva yakareba cannabis mumiriri ari kutungamira kurwira kwekuvaraidza cannabis muMissouri. Vhiki rino Dhani akadonha achitaura pamusoro peMissouri cannabis mitemo uye zvavakaronga neElection Day.
Dan Viets ndiani?
Missouri cannabis Gweta, Dan Viets, parizvino ari kushanda kunze kweColombia, MO
Anodzivirira matsotsi cannabis kesi
NORML Board of Directors neMissouri State Coordinator weNORML
Akaratidzira mudunhu rega rega nemubatanidzwa wedare muMissouri
Kudzidzira mutemo kubvira 1986
Cannabis pane Bhoti
Missouri ingangodaro isina rekodhi yepamusoro ye cannabis, asi ivo vari kuyedza kuchinja izvo. Missouri inoda kunyoresa kuvhiringidza cannabis muna 2020. Kuti vasvike pakuvhota, zvakadaro, vanoda 160,199 masaini muna Chivabvu 3, 2020. Muna 2018, Missouri yakavhota kuti ipfuure iyo Medical Marijuana uye Veteran Healthcare Services chirongwa colloquingly inozivikanwa se Amendment 2. Amendment 2 zviri pamutemo cannabis yekushandiswa pakurapa, yakaiswa mutero we4%, inotaura kuti mutero unozoenda kune hutano hwekuchengetedza masevhisi. Amendment 2 yakapfuura ne65.59% yevhoti. Kukura kwemba kunotenderwa kune varwere uye a mamiriro mashoma anokodzera zvinosanganisira PTSD, IBS, uye chirwere chisingaperi.
Chii Adult Use Anotaridza Kufanana neMissouri?
Missouri cannabis Gweta, Dan Viets, pamwe na MaMissourians weNzira Itsva, vari kuunganidza masaini echikuru-shandisa cannabis chirongwa. Pasi pechirongwa ichi:
Vakuru 21+ vachabvumidzwa kutenga uye kuva ne cannabis
Dzimwe mhosva dze cannabis dzinozodzingwa
15% yemutero ichaiswa pakutengesa kutengesa
Mari yemutero kubva kumutengesi inotengeswa ichagoverwa kuMissouri veterans Commission, State Road Fund, nemasangano asina mari anobatsira kurapwa kwezvinodhaka nekudzivirira zvakanyanya.
Chii Chingaitwe neMissouri Cannabis Gweta Yekuitira Iwe?
Medical cannabis yanga iri pamutemo muMissouri kubvira muna 2018. Parizvino, isu tiri kuona kukurudzira kwakasimba kubva kune vemitemo kuti vanyorese zvekunakidzwa mbanje muMissouri muna 2020. Izvi zvichabata sei Musika wemba mbanje? Tichakwanisa here kuona mutambo wakanaka pamusika kana zvasvika pakukura, kutengesa, uye mbanje mawadhi munzvimbo? Isu tinopa mhinduro sechikamu cheDan Viets uye Associates iyo inobatsira kuumba mamiriro ekunze akanaka emabhizinesi nevashandisi vembanje kuMissouri.
Marijuana ichave inozivikanwa pamutemo muMissouri muna 2020 here?
Vanopemberera Marijuana vane simba mukutsigira Mitemo yekuSchool mbanje. Vachavhota vachawana mukana wevhoti yekushandiswa kwevakuru-mbanje kuMissouri muna 2020, izvo zvinozovhura mikova yemikana yakawanda yebhizinesi mudunhu iri.
Ongororo yemari inoratidza kuti nyika inogona kuburitsa kusvika kumamiriyoni gumi nemashanu emamiriyoni emadhora pagore ne155. Kufungidzira uku kunotaura nezve mukana wemikana yebhizinesi mune ino. Nyika zhinji dzinopa huwandu hwakakura hwemari yekutenda kune ino bata system iyo inobvumira vashandisi ve cannabis kuti vapedze mbanje.
Kana zvasvika pane yekurapa mbanje, fungidziro iri kutiudza kuti, muna 2020, kuchave nevarwere vangangoita zviuru gumi nevaviri vakanyoreswa pakurapwa mbanje kuMissouri. Ivo vese vanokodzera kanzuru yepamutemo yekurapa mbanje kadi iyo inozoshanda semvumo yekushandisa mbanje nekuda kwekurapa.
Zvinorevei Marijuana Pamutemo Pamakambani Akazvimirira kuMissouri?
PaNovember 2020 kuvhota, vanhu vanovhota kuMissouri vachave nemukana wekuvhotera cannabis zviri pamutemo izvo zvinofanirwa kutendera vanhu vane makore makumi maviri nemasere kana kupfuura kuti vave neunzi rimwe rembanje repamba Kutenga kuchaita kugadzira kubva kune vanotengesa marezinesi vatengesi vava kuedza kuwana marezinesi ekuve chikamu chemusika we cannabis musika.
Nyika yakazivisa kuti marezenesi 192 achapihwa gore rino muMissouri, ayo achingova gumi nematanhatu muzana muzana yezvese mafomu ekutumira ayo achazotenderwa gore rino. Pakazere, 16,5 vanonyorera vanoedza kutora rezinesi kune masangano kumapurovhinzi, iyo inotaura nezve huwandu hwemari inogona kuwanikwa kana hurumende ikabvumidza vakawanda vanyoreri kuwana rezenisi.
Mukufananidza, Colorado yakapa marezinesi e1,577 ekuzvidzikisira cannabis emabhizimusi muna 2018. Kunyangwe huwandu hwemarezinesi akapihwa hwakaderera zvishoma na2020, tinogona kuona kuti Colourado inotsigira sei mabhaisari nemabhizinesi madiki anovavarira kuva chikamu chemusika weColorado cannabis. MunaJune 2019, Colorado yakapfuura madhora bhiriyoni emari mu cannabis yenyika mari, ndiyo yaive imwe yemhedzisiro yemakanzuru mazhinji ekushandisa kwevakuru mutoro.
Dhipatimendi rezvehutano rinogona kupa marezinesi akawanda sezvavanoda, asi maonero evaMissouri ndevekuti makanzura nenzvimbo dzekurima dzinofanirwa kushomeka zvine mutsindo. Vanonyorera marezenisi ekunze vanoenda kunosarudzo kusimbisa kunoenderana nechirairo chekuwisira. Vazhinji vevakanyorera vakanyunyuta nemafambisirwo akaitwa maficha nekuti makambani akazvimiririra ane mimwe mitemo yawo pakuongorora. Kana izvi zvikaramba iri nyaya muMissouri, iyo yemuno mbanje bhizinesi musika inogona kurasikirwa mikana yakakura yekukwana mari yekutengesa iripo.
Missouri Vanogona Sei Gweta MaCanabis Magweta Kubatsira Kutonga Marijuana Zvemutemo muNyika Ino?
Nehurongwa hwese hwe cannabis pamutemo kuMissouri, panouya mubvunzo nezve kunyorwa chaiko kwezvakagadzirwa mbanje. Mitemo yekunyora inechekuita neMissouri sedzimwe nyika, kusanganisira South Dakota uye Kansas, uko kunyora kunofanira kutsaura zvigadzirwa nenzira chaiyo. Mapakeji uye mavara anofanirwa kusangana nemiyero iyo inoshanda kune kukurudzirwa kwepamutemo. Kushambadzira uye kushambadzira kwezvakagadzirwa zvinofanirwa kuve zvakare kwakarongeka zvakanaka, kunyanya kana zvasvika pakushambadzira kune vechidiki vari pasi pemakore 21. Zvigadzirwa zvinofanirwa kunyorwa zvakajeka uye kushambadzirwa nenzira isingafadze vechidiki.
Kutsvaga Missouri Cannabis Gweta kwakanaka Sarudzo yekutanga Bhizinesi?
Iyo danho rekuti mbanje pamutemo muMissouri inotora kuzadzikiswa kwayo kuzere muna 2020. Tichaona kuti nyika ino ingaramba sei ichikwidziridza nenyika idzo dzakatodzora kutandara mbanje kushandiswa Vakuru vanoti ichave danho rakakura kune iyo Missouri cannabis indasitiri munhau yekodzero dzevashandi uye mutemo wedare.
Kana iwe ukaronga kuvhura shopu yeresheni kana yekutengesa, iwe unofanirwa kutsvaga a Missouri cannabis gweta ndiani anogona kukubatsira iwe nemitemo yakakodzera mbanje bhizinesi mudunhu reMissouri.
Dan Viets Mutemo